बिहेपछि झनै ‘बोल्ड’ बन्दै नायिका आँचल शर्मा, हेराैँ १२ तस्बिर – Gorkhali Dainik
April 23, 2021 434
पोखरा- नेपाली चर्चित लोकप्रिय नायिका हुन् आँचल शर्मा । उनकाे प्रेमिदेखि बिवाहसम्म निकै चर्चा भयाे । उनले गतबर्ष डा. उदिप श्रेष्ठसँग बिहे गरेकी हुन् । उनको बिवाहले पनि निकै चर्चा पाएको थियो । विबाहमा हेलिकप्टर चढेर आएपछि त उनी झनै चर्चामा आइन् ।
उनका कैयन फ्यानले सोचेका थिए आँचल पल शाहकी प्रेमीका हुन् भन्ने । तर आँचलले पल एउटा मिल्ने साथी मात्रै भएको भन्दै प्रेमी डा उदिप श्रेष्ठसँग धुमधामसँग विबाह गरिन् ।
आँचलले केहि पहिला एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिन जाँदा उनले लगाएको लुगाले धेरैको ध्यान खिचेको छ । रातो रङको कटिङवाला गाउन लगाएर उनी वर्षा शिवाकोटीसँगै सोमा देखिएको भिडियोले राम्रै चर्चा पायो । उक्त शो मा जाँदाको तस्बिर उनले यसअघि सामाजिक संजालमा समेत शेयर गरेकी थिइन् ।
बिहेपछि धेरैको फेसन कुर्ता र सारीमा खुम्चने गरेकोमा आँचलले भने आँफु झनै मेन्टेन गर्दै आफ्नो ‘बोल्ड’ रुप दर्शकलाई देखाइरहेकी छन् र उनले केहिसमय अघि बिहे पछि बाेल्ड कपडा वा जस्ताे सुकै कपडा लगाउदा काेहि कसैले केहि भन्लान् भन्ने ड-र हुदैन समेत भनेकि थिइन् ।
त्यस्तै पछिल्लो समय पनि उनले समाजिक संजालमा बोल्ड लुकमा केहि तस्बिर शेयर गरेकी छिन् । जहाँ उनि मन्द मुस्कानमा निकै सुन्दर देखिएकी छन् । फ्यानहरूले पनि उनको सुन्दरताको तारिफ गरेका छन् ।
उनका थप तस्बिर
Prevयस्तो भए २०७२ सालको भूकम्पमा २२ घन्टा पु’रिएका सोनिस !
Nextमोडल दुर्गेश थापाले पहिलो पटक श्रीमती र छोरालाइ देखाए भिडियोमा (हेर्नुहोस)
मास्क नलगाए गाडी चढ्नै नपाइने, विवाहमा २५ जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने